VPN Zoma Mainty 2020 - Fifanarahana manokana (Voamarina) - Lists
Fifanarahana VPN Black Friday 2020 - Fihenam-bidy saika 90% (Voamarina)
Ny fifampiraharahana amin'ny zoma mainty VPN dia fantatra fa fotoana andrasana indrindra amin'ny taona ho antsika mpampiasa VPN. Ny fifampiraharahana amin'ny zoma mainty VPN mamonjy vola be dia be amintsika ka mendrika ny fiandrasana. Raha mitady varotra VPN zoma mainty ianao, dia eo amin'ny toerana mety.Ny VPN dia nanjary filàn'ny mpampiasa miaraka amin'ny tranokala mitombo voasakana amin'ny alàlan'ny ISP na ny sampana IT ao amin'ny toeram-piasanao.
Betsaka ny olona no mampiasa VPN amin'ny fitetezana azy fa koa amin'ny fandefasana azy, ny VPN dia manana fahafaha-manafoana ny atin'ny tranokala streaming. Betsaka ny mpitia an'i Netflix no tsy te handany vola be amin'ny VPN, noho izany, miandry ny tolotra toa ny BlackFriday VPN fifanarahana manome azy ireo ny sandam-bola tsara indrindra.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fifaninanana eo amin'ny tsena VPN, nanjary sarotra ny misafidy ny tsara indrindra VPN. Moa ve ianao anisan'ireo izay misavoritaka amin'ny VPN hovidiana ary miandry trosa sasany?
Aza manahy, fa voasaronao izahay. Miaraka amin'ny fifampiraharahana TOP 10 Black Friday VPN, ianao dia afaka misafidy tsara ny VPN mety aminao mifototra amin'ny fifanarahana natolotry ny VPN isan-karazany eny an-tsena.
Mba hanamorana izany ho anao, dia notanisainay ny TOP 10 Black Friday VPN fifampiraharahana ho anao, tafiditra ao ny fiasa sy ny vidiny.
VPN Fifanarahana zoma mainty (2020)
Drafitra 12 volana
(+ 3 volana maimaim-poana)
Fihenam-bidy 49% + Extra 3 Volana
Mahazoa fihenam-bidy 49% izao
Tsy misy famoahana data
Vidiny drafitra 2 taona
+ Famandrihana fanampiny
Diso 68% + 3 volana maimaim-poana
Fitaovana tsy voafetra
Fanaraha-maso tsy miankina
Mahazoa fihenam-bidy 83% izao
Fanitarana ny Browser
Vidim-drafitra 5 taona
Mihena 86% amin'ny drafitra 5 taona
Mahazoa fihenam-bidy 86% izao
Fiarovana ny famoahana IP
Fampiasana fitaovana 7
Drafitra 3 taona
79% Off amin'ny drafitra 3 taona
Mahazoa vola 79% izao
Torrenting tsy fantatra anarana
Servers 60 Firenena
12 volana + 12 volana fanampiny vidin'ny drafitra
Mahazoa fihenam-bidy 81% izao
Fiarovana Wi-Fi ho an'ny daholobe
Mahazoa fihenam-bidy 77% izao
ExpressVPN dia VPN mitarika eo amin'ny tsena, miaraka amina endri-javatra tsy manam-paharoa, ny ExpressVPN dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo VPN notadiavin'ny mpampiasa indrindra. Milaza izy fa iray amin'ireo VPN haingana indrindra eny an-tsena. Fantatra tsara amin'ny fandefasana azy, VPN azo antoka io izay manome anao izay rehetra ilainao amin'ny vidiny mety.Miaraka amin'ny ExpressVPN Zoma Mainty fifanarahana, afaka manangona hatramin'ny 49% ianao ary afaka telo volana maimaim-poana.
Miaraka amin'ny tsiambaratelo tsara indrindra, ExpressVPN mamela anao hizaha miafina amin'ny Internet. Mahazo iray amin'ireo Encryption tsara indrindra eto an-tany amin'ity VPN ity ianao. Manompo anao amin'ny toerana misy mpizara 160+ ianao hisafidiananao sy hijerenao tsara. Fantatra amin'ny fanomezana streaming avo lenta, Netflix sy Torrenting dia ho malama tsara amin'ny ExpressVPN. Tsy hahatsapa zavatra ianao, ary ho toy ny fizahana mahazatra ho an'ny mpampiasa rehetra izany.
Miaraka amin'ny tena vidiny manomboka amin'ny $ 12.95, ny fifanakalozana zoma mainty dia manomboka amin'ny $ 6.67 fotsiny. Fifanarahana mamonjy anao 49%, handoa $ 99.95 ianao mandritra ny 15 volana voalohany. Fifampiraharahana adala ho an'izay te hividy VPN izany ary hanomboka amin'ny fiarovana sy fiainana manokana.
Ny fifanarahana dia miaraka amin'ny antoka fampindram-bola mandritra ny 30 andro ihany koa. Azonao atao ny manamarina ny tranonkalany ofisialy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy anay hahafantarana bebe kokoa momba ny politika famerenam-bola.
Fandefasana tsy voafetra
Surfshark dia VPN feno endri-javatra, ary azonao ampiasaina izany amin'ny filàna fitetezana anao rehetra. Ny fifanarahana Surfshark Black Friday dia fifanarahana farany izay hanadino ny sainao. Manolotra fihenam-bidy 83% amin'ny tena fifanarahana izy. Iray amin'ireo VPN ihany izy io izay manome fidirana amin'ny fampiasana fitaovana tsy voafetra miaraka. Maro amin'ireo mpifaninana aminy no mametra ny fampiasana ny fitaovana miaraka amin'ny 5 na 10.
Surfshark dia miaraka amina famonoana mpamono olona tena tsara, na dia hanidy ny fampiharana aza ianao nefa tsy fantatrao dia ho voaro ianao mandritra ny fotoana rehetra. Tsy mila mitazona ny vakizoro VPN ianao hidirana aminy. Manaraka ny politikany tsy misy kitay henjana izy ireo, izay miantoka fa tsy misy zavatra jerenao. Izy ireo dia manolotra ireo fiasa rehetra ireo amin'ny vidiny ambany indrindra.
Ny fifampiraharahana amin'ny antsantsa an-dranomasina Surf shark dia manome antsika vidiny lafo amin'ny $ 1,99 isam-bolana. Ny sandan'ny VPN marina dia $ 11,95 isam-bolana, ary ity dia fividianana olona tsy te halahelo. Manangona $ 240 eo ho eo ianao rehefa mividy ny drafitra 2 taona amin'ny Surfshark. Ny ampahany tsara indrindra dia ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ity fifanarahana ity ao anatin'ny 30 andro raha tsy faly amin'ny VPN ianao.
Vonoy ny switch
Tsy misy hazo
IPvanish dia VPN iray hafa mitombo eo amin'ny tsena. Manolotra interface tsara sy tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa azy izy. Miaraka amin'ny endri-tserasera mivantana dia azonao atao foana ny misafidy mandefa azy ireo raha misy ny fangatahana na olana. Raha ampitahaina amin'ireo VPN hafa dia vidiana amin'ny taha ambany kokoa, amin'ny ankapobeny ho an'ny mpampiasa tsirairay. Raha mitady fifandraisana an-trano na tanjon'ny asa ianao, dia vidina sahaza ity VPN ity hanatanterahana ny zavatra ilainao.
IPvanish dia manolotra anao ireo fiasa mahafinaritra rehetra amin'ny vidiny ambany indrindra ary afaka mampiasa tsara indrindra an'io fampiharana io ianao. Ny vidin'ny VPN ity dia tsara. Ny fifanarahana zoma mainty ho anao dia vidin'ny $ 6.49 isam-bolana izay $ 77.99 isan-taona; na izany aza, raha tsy misy ny fifanarahana dia 143.88 dolara isan-taona ny drafitra. Mitahiry hatramin'ny 46% amin'ity fifanarahana zoma mainty ity ianao.
Azonao atao ny manamarina ny tranonkalany ofisialy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy anay hahafantarana bebe kokoa momba ny politikam-bola.
30 andro antoka antoka vola
Fanohanana lehibe ho an'ny mpanjifa
Fampandrenesana AES 256-bit
Fitehirizana miafina Sugarsync
Iray amin'ireo VPN nalaza nandritra ny folo taona mahery, Hotspot Shield, dia VPN tsara raha resaka fiainana manokana sy fiarovana no resahina. Malaza be eo amin'ireo mpampiasa izany ary manana tobin'ny mpanjifa mafy orina.
Thevero tsara ny tenany, ary mihambo ho VPN # 1 izy ireo. Tsy toy ny ankamaroan'ny mpifaninana aminy, manome valiny miverina 45 andro mihoatra ny antoka famerenam-bola 30 andro izy ireo. Mahazo ny fanohanan'ny mpanjifa tsara indrindra ianao 24/7 ary miditra amin'ny toerana mihoatra ny 115. Azonao atao ny mampiasa ampinga hotspot amin'ny fitaovana 5 indray mandeha.
Ny vidin'ny ampinga Hotspot dia vita tsara, miaraka amin'ny fifanarahana zoma mainty, azonao atao ny mividy ampinga hotspot VPN amin'ny $ 2.99 isam-bolana fotsiny. Ny drafitra isam-bolana dia mitentina $ 12,99, saingy ity fifanarahana ity dia azonao atao ny mitaky izany amin'ny $ 2.99 fotsiny, manome anao tahiry 77%.
Encryption amin'ny ambaratonga miaramila
Famerenam-bola 45 andro
Hatramin'ny fahazoana miditra amin'ny fitaovana 5
NordVPN dia VPN azo antoka sy ultrafast izay manaraka politika tsy misy kitay. Misy endri-javatra mihoatra ny 20 amin'ny NordVPN, ary io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho anao. Miaraka amin'ny interface interface-tena-mpampiasa, afaka manomboka amin'ny NordVPN milamina ianao.
VPN izay manome anao ny fiasa rehetra tadiavinao, azonao atao ity VPN ity amin'ny $ 3,71 isam-bolana fotsiny mandritra ny roa taona. Ny vidin'ny VPN marina dia $ 11.95 isam-bolana, fa ny fifanarahana amin'ny Zoma Mainty dia mamela anao hitaky fihenam-bidy 70%.
Rindrambaiko tsara ho an'ny streaming izy io, koa raha sanatria isan'andro, VPN fotsiny no tadiavinao ho an'ny tanjona mivantana, fantatrao fa izany no fampiharana tsara indrindra ho anao. Netflix sy Torrent dia mahazaka haingana miaraka amin'ity VPN hafainganam-pandeha ity.
Fanitarana ny mpizaha
Fandraisana fidirana manerana izao tontolo izao
Cyberghost dia VPN iray hafa misy naoty 5-kintana avy amin'ireo mpampiasa VPN lehibe. Manome fiainana manokana izany ary manohana ny fanakanana doka hahafahanao mizaha sy mandeha tsara. Miaraka amin'ny Hotspot Shield dia iray amin'ireo VPN vitsivitsy izay manome antoka azo antoka.
CyberGhost dia VPN mitarika izay manome anao ireo lafin-javatra rehetra voalaza etsy ambony ireo miaraka amin'ny tena lafo amin'ny vidiny lafo. Ny ampahany tsara indrindra dia, amin'ny fifampiraharahana amin'ny Zoma Mainty, afaka mitsitsy vola bebe kokoa ianao. Tsy mila manahy momba ny fahazoana miditra amin'ity fitaovana ity ianao. Hita mora amin'ny sehatra sy fitaovana rehetra toy ny iOS, macOS, Android, Windows, Firetv, chrome, firefox, ary maro hafa.
Ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 12,99 isam-bolana, fa amin'ny fifanarahana zoma mainty, azonao atao amin'ny $ 2/75 isam-bolana fotsiny. Mamonjy anao 82% io, tsy ho an'ireo fiasa atolotra azy ihany, ary VPN tsara izany.
Vonoy ny famonoana
45 andro antoka vola
Tsy misy politika
PrivateVPN dia manolotra zavatra betsaka ho an'ny mpampiasa azy, ary ho gaga ianao amin'ny fahafantarana fa amin'ity zoma mainty ity dia afaka mangataka 12 volana maimaim-poana ianao amin'ny fividianana PrivateVPN mandritra ny 12 volana. Miaraka amin'ny fisian'ireo sehatra lehibe, manome antsika ny hafainganam-pandeha tsara indrindra hijerena sy hikoriana.
PrivateVPN dia manolotra izany rehetra izany amin'ny 50% amin'ny vidiny tena izy, mandoa herintaona ianao ary mampiasa azy roa. Fifanarahana adala nefa mahitsy ho an'ny mpampiasa. Ny vidiny marina dia mivoaka amin'ny $ 7.12 isam-bolana. Ny fifanarahana zoma mainty ho an'ny PrivateVPN dia manomboka amin'ny $ 1,89 isam-bolana mandritra ny roa taona. Izany dia totalin'ny $ 45.36 fotsiny hampiasana VPN mandritra ny roa taona - fifanarahana mahafinaritra amin'ny vidin'ny bundle izay manome anao antoka famerenam-bola 30 andro.
Fiarovana amin'ny famoahana IPv6
Fifandraisana 6 miaraka
ZERO Politique Logging Log
Servers amin'ny firenena 60
PureVPN dia fitaovana VPN premium izay idiran'ny mpampiasa manerantany, ary manolotra toerana mpizara mihoatra ny 2000+ any amin'ny firenena samihafa izy ireo. Manakatona saika ny tranokala mivantana rehetra hampiasanao izany ary manome anao hafainganam-pandeha tsara ihany koa. PureVPN dia vao haingana, tamin'ny taona 2016, no nanavao ny politikany momba ny tsiambaratelo mba tsy hitahiry hazo ary avelao ireo mpampiasa azy hijery maimaimpoana.
PureVPN dia manome anao fifanarahana zoma mainty lehibe, ary afaka mividy drafitra mandritra ny telo taona ianao eo am-pandoavana iray amin'izany. Ny tahan'ny tena izy dia manomboka amin'ny $ 10.95, fa ny fifampiraharahana amin'ny Zoma Mainty dia mitentina $ 3,33 isam-bolana. Ny fihenam-bidy 70% miaraka amin'ny antoka famerenam-bola 31 andro dia fifanarahana tianao ho azo.
Fanohanana mivantana 24 ora
Ivacy VPN dia mifanentana ambony indrindra VPN izay manome anao ny endri-javatra rehetra ao anatin'ny iray VPN. Miaraka amin'ny fiarovana tsara sy ny traikefa amin'ny streaming tsy mampino, ary azon'izy ireo daholo ny ilainao amin'ny VPN.Ny fifantohan-dry zareo voalohany dia ny fanomezana fiarovana ireo mpampiasa hatrany; nahavita be tokoa izy ireo.
Ivacy VPN dia manome endri-javatra maro hafa koa. Manana andrana maimaimpoana mandritra ny 7 andro ihany koa izy ireo izay azonao angatahina amin'ny tranokalan'ny tompon'andraikitra. Ny vidiny ho an'ny IvacyVPN dia manomboka amin'ny $ 9.95 isam-bolana. Na izany aza, ny vidiny fihenam-bidy dia $ 1,16 isam-bolana. Miakatra tp $ 70 isan-taona, mitahiry 88% amin'ity fifanarahana ity ianao. Manome anao tambin-karama fampidirana fitaovana folo mahafinaritra izy ireo, ary azonao ampiasaina maimaim-poana izany miaraka amin'ny fitaovana maro.
Safidy ho an'ny tanjona kendrena
VPN iray hafa tsara, ho hitanao io VPN mora azo amin'ny sehatra lehibe io. Proton VPN dia nilaza fa manana fiarovana fanampiny amin'ny VPN mahazatra rehetra, ary ity ny VPN izay manome safidy bebe kokoa amin'ny fiarovana ny mpampiasa izay manome endrika mahafinaritra. Na izany aza, manana endri-javatra miavaka ihany koa izy ireo.
Hafa noho ireo fiasa voalaza tetsy aloha, dia manome antoka famerenam-bola 30 andro ihany koa ho an'ireo mpampiasa azy. ProtonVPN dia VPN haingam-pandeha, ary azo antoka fa azonao jerena bebe kokoa izany.
Ny sarany dia manokana, ary ny drafitra fototra dia manomboka amin'ny $ 3,29 isam-bolana. Saingy, ny drafitra roa taona dia mamonjy anao $ 241 satria ny vidiny dia $ 479. Mahazo ny endri-javatra tsy voafetra rehetra ianao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo fitaovana 10 miaraka.
Fitaovana hatramin'ny 10
Fisorohana ny famoahana DNS
Fepetra lehibe hijerena mandritra ny fividianana VPN amin'ny fifanarahana zoma mainty:
Ny fividianana VPN dia mety ho fampiasam-bola kely ho an'ny orinasa goavambe sy olona mampiasa azy isan'andro, na izany aza, ao amin'ny tranokalanay, manoro anao izahay hahafantatra izay tokony antenainao amin'ny VPN hovidinao.
Tokony hohamarininao hatrany fa ny VPN novidinao dia manaraka ny politika tsy misy hazo feno. Maro amin'ireo VPN eo amin'ny tsenan'ny indostria no manao politika VPN tsy misy log, fa ny sasany amin'izy ireo kosa dia mitazona hazo. Miaraka amin'ny VPN izay tsy mitahiry firaketana dia azonao atao ny mizaha raha tsy misy fanahiana ny fanarahana azy.
Betsaka amin'ireo VPN no manana encryption AES 256, izay fampiasa tsara indrindra ary ambony no ampiasaina amin'ny VPN. Tadiavo ny karazana Encryption alohan'ny ividiananao VPN.
Ilaina ho an'ny rehetra ny hafainganam-pandeha, ary tsy misy olona mankafy ny tranokala mihemotra na miadana. Ny VPN dia tokony ho toy izany na dia mizaha sy mikoriana aza dia tsy tokony hahatsapa ny fihenan'ny hafainganana ianao. Ny hafainganam-pandeha dia tokony ho tsy hahatsapanao ny fisian'ny VPN. Na izany aza, miankina amin'ny mpizara ihany koa ny hafainganam-pandeha.
Zava-dehibe ny fiarovana, ary tsy maintsy azonao antoka fa manome fiarovana anao tanteraka ny VPN anao, manome anao adiresy IP vaovao, ary manarona ny adiresy IP anao voalohany.
Tsy misy olona te handeha amin'ny alàlan'ny fomba maro sy ny dingana hanombohana VPN, VPN dia tokony ho tsotra, manana switch switch, mampirehitra azy, ary miasa fotsiny tsy misy ahiahy, tokony ho mora idiran'ny mpampiasa izy io .
Ny VPN rehetra dia tokony hifantoka amin'ny fanomezana fanohanana lehibe ho an'ireo mpampiasa azy; maro amin'ireo VPN no manana fifandraisana mivantana amin'ny resaka, fa ny sasany amin'izy ireo kosa tsy. Tsy maintsy misafidy VPN manohana anao amin'ny hadisoana ianao ary mamaly haingana ny fangatahana.
Na dia mampiditra vola mitombina aza dia maniry ny hanana VPN manohana fitaovana maro ny olona iray. Raha miresaka VPN, ny sasany amin'izy ireo dia miverina amin'ny fitaovana 5, ny sasany kosa manohana fito sy sasany 10. Raha arakaraka ny filanao dia alao am-pitandremana ny fanapahan-kevitra momba ny isan'ny fitaovana miaraka tianao hampiasa ny VPN.
Sehatra lehibe manohana
Mandritra ny fividianana VPN amin'ny fampiasana fitaovana marobe, tsy maintsy ataonao antoka fa manohana sehatra lehibe ny VPN. Ny VPN sasany mety tsy misy amin'ny iOS, fa ny sasany mety manana kinova PC fotsiny. Ataovy ao an-tsaina ireo sehatra maro samihafa anananao ary mila ny VPN alohan'ny hividianana.
Antoka azo antoka amin'ny famerenam-bola
Mpampiasa maro no mividy drafitra isan-taona ary avy eo mangataka famerenam-bola avy amin'ny antoka vola. Ity dia mety hampiarahina amin'ny tanjona fitsapana sy amin'ny fampiasana ny fampiharana mandritra ny iray volana maimaim-poana. Tokony ho azonao antoka fa mividy drafitra VPN ahafahanao manana antoka miverina amin'ny vola ianao. Ny ankamaroan'ny VPN dia manome antoka famerenam-bola 30 andro; na izany aza, misy VPN vitsivitsy manome antoka hamerenana vola 45 andro.
Ilaina ny safidin'ny mpizara. VPN maro no manome serivera an'arivony maro hiditra amin'ireo mpampiasa azy, ary tokony ho azonao antoka fa manana VPN manana mpizara maro manerana ny firenena maro ianao. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mizaha toetra sy mamantatra hoe iza ny mpizara haingana ary iza no mpizara manome anao ny vokatra tsara indrindra.
1Q. Azoko atao ve ny mahazo antoka miverina amin'ny fividianana fifampiraharahana zoma mainty?
taona:Raha manome anao antoka famerenam-bola ny VPN novidinao, dia azo antoka fa hitaky izany ianao. Zahao ny tranonkala ofisialin'ny VPN raha mila fanazavana fanampiny.
2Q. Iza amin'ireo fifanarahana hafa atolotry ny VPN ankoatry ny zoma mainty?
taona:Ny fifanarahana dia hivoaka amin'ny tranokala ofisialin'ny VPN, na izany aza, ankoatry ny Black Friday, ary ny fifanarahana lehibe dia mivoaka amin'ny Alatsinainy Cyber ​​sy mandritra ny Taombaovao '.
Zoma Mainty VPN Ny fifanarahana VPN dia mahatalanjona tokoa. Tsy maintsy mbola manontany tena ianao momba ireo safidy rehetra ireo, izay VPN no safidiana. Tsara daholo izy rehetra. Na izany aza, izahay manokana dia hanome soso-kevitra ny ExpressVPN noho ny endri-javatra lehibe sy ny hafainganana.
Manantena izahay fa afaka manome anao ny fifanarahana tsara indrindra izay nahafaly anao sy namonjy anao. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny varotra VPN zoma mainty, hevitrao amin'ny chatbox eto ambany. Tianay ny handre valiny ary koa handinika ny soso-kevitrao sarobidy ao amin'ny chatbox.
VPN tsara indrindra ho an'ny FireStick (2020)
FMovies - Afaka mijery sarimihetsika amin'izany ve isika?
Ahoana ny fananganana Xbox amin'ny alàlan'ny telefaona aka.ms/xboxsetup?
Rahoviana no ho avy ny Rent A Girlfriend Season 2? Daty famoahana, Tetika, Fanavaozana & Spoilers
lalao any an-tsekoly tsy voasakana
vonoy ny fampiharana modely azo antoka tumblr
youtube to mp3 converter download maimaim-poana an-tserasera mac
karatra fanomezana 10 amazona maimaimpoana
emulator ho an'ny iphone ios 10
tranokala sarimihetsika vaovao hijerena an-tserasera